जेलमा रहेका रेशम चौधरीको पार्टीले लियो टीकापुरमा अग्रता
काठमाण्डौ । लामो समयदेखि जेलमा रहेका रेशम चौधरीको पार्टीले कैलालीको टीकापुर नगरपालिकामा सुरुवाती अग्रता लिएको छ । चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका मेयर उम्मेदवारले सय मत गन्दा ३४ मत पाएका छन्। एमालेले १८ र कांग्रेसका उम्मेद्वारले १६ मत पाएका छन्। अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा यो क्षेत्रमा एमालेले मेयर जितेको थियो । ...
शंकरापुरमा राप्रपाको अग्रता, एमाले पछि पछि
काठमाण्डौ । काठमाण्डौको शंकरापुर नगरपालिकामा राप्रपाले सुरुवाती अग्रता लिएको छ । हिजो सम्पन्न स्थानीय निकायको निर्वाचनको मतगणना सुरु भई प्राप्त प्रारम्भिक नतिजाअनुसार राप्रपाका उम्मेद्वारले अग्रता लिएका हुन् । राप्रपाका रमेश नापित चार मतले अगाडि रहेका छन् । यो नगरपालिकामा एमाले र एकीकृत समाजवादी दोस्रो र तेस्रो नम्बरमा...
विराटनगरमा पनि मतगणना सुरु, एक्जिट पोलजस्तै होला कि सरप्राइज रिजल्ट आउला ?
काठमाण्डौ । विराटनगर महानगरपालिकामा पनि मतगणना सुरु भएको छ । निर्वाचन कार्यालयका अनुसार विराटनगर महानगरपालिकाको वडानम्बर १, २ र ३ तथा १७, १८ र १९ नम्बर वडाको मतपेटिका खोलेर एकसाथ मतगणना थालिएको हो । विराटनगर महानगरपालिकाको मेयर पदमा गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका नागेश कोइराला तथा एमालेको तर्फबाट सागर थापाबीच मुख्य...
काठमाण्डौ । सर्वाधिक चासोको विषय बनेको काठमाण्डौ महानगरपालिकाको मतगणना सुरु भएको छ । राष्ट्रिय सभागृहमा केहीबेरअघिदेखि काठमाण्डौ महानगरपालिकाको मतगणना सुरु भएको हो । सर्वदलीय बैठकमा भएको सहमतिअनुसार काठमाण्डौको वडानम्बर १ र ३२ बाट एकैपटक मतगणना थालिएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । मतगणनास्थल क्रमशः थप्दै जाने रणनीति...
गोरखाको पालुङटारमा जसपाको अग्रता, जोगिएला बाबुराम भट्टराईको साख ?
काठमाण्डौ । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीको संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईको गृहनगर गोरखाको पालुङटारमा जनता समाजवादी पार्टी र एमालेका संयुक्त मेयरका उम्मेद्वारले अग्रता लिएका छन् । यो नगरपालिकाको प्रारम्भिक मतपरिणाममा यस्तो अवस्था देखिएको हो । यो नगरमा जनता समाजवादी पार्टी र एमालेबीच चुनावी तालमेल...
मध्यपुर थिमीमा कांग्रेसको अग्रता, माओवादीलाई गठबन्धनबाट अन्तर्घात !
भक्तपुर । भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वारले अग्रता लिइरहेका छन् । गठबन्धनबाट साझा उम्मेदवार बनेका कांग्रेसका सुरेन्द्र श्रेष्ठले ८०० मत गन्दा ४३७ मतसहित अग्रता लिएका हुन् । उनलाई एमालेका मदन सुन्दर श्रेष्ठले २८६ मतसहित पछ्याइरहेका छन्। उपमेयरमा एमालेकी उत्तरा नेपालले ३३६ मतसहित अग्रता लिएकी...
दाङ । दाङको राप्ती गाउँपालिका वडा नं। ९ को वडाध्यक्ष पदमा नेकपा माओवादी केन्द्रका रिमबहादुर सुनारी मगर विजयी भएका छन् । यो वडामा कुल ७१४ मत खसेको थियो । मगरले ३५८ प्राप्त गरी अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । यो वडामा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारले १९८, नेकपा एमालेका उम्मेदनवारले ७६ , स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू गुलाफको फूल १७ र छाता चुनाब...
धुलिखेलमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको अग्रता, गठबन्धनको अवस्था दयनीय
काठमाण्डौ । काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिकाको मतगणना सुरु भएको छ । सो क्षेत्रमा हालसम्म ५ सय मत गणना हुँदा रोचक परिणाम आएको छ । मेयरका लागि स्वतन्त्र उम्मेद्वार विदूरकुमार बस्नेतले २८३ मतसहित अग्रता लिएका छन् । उनी नेपाली कांग्रेसबाट विद्रोह गरी स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका व्यक्ति हुन् । उनली धुलिखेल कांग्रेसका सभापति पनि हुन् । ...
कागेश्वरी मनोहरामा कांग्रेसका अग्रता, ३०० मत गन्दा माओवादीलाई शून्य
काठमाण्डौ । काठमाण्डौको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा पनि मतगणना सुरु भएको छ । सुरुवाती मतपरिणामअनुसार वडानम्बर १ को मतगणना हुँदा यो नगरपालिकामा नेपाली कांगे्रसबाट मेयरका उम्मेद्वारले अग्रता लिएका छन् । ३०० मत गन्दा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वाले १५३ मतसहित अग्रता लिएका हुन् । एमालेका उम्मेद्वारले १४१ मतसहित पछ्याइरहेका छन्...
काठमाण्डौ । काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिकामा मतगणना सुरु भएको छ । सुरुवाती अवस्थामा मेयरमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वारले अग्रता लिएका छन् । मेयरका लागि १ हजार मतगणना हुँदा कांग्रेसका उम्मेदवार राजकुमार नकर्मीले ४२७ मतसहित अग्रता लिएका छन् । उनलाई एमालेका केशरत्न बज्राचार्यले २८० मतसहित पछ्याइरहेका छन् । माओवादी...
सिद्धार्थनगरमा कांग्रेसको अग्रता
बुटवल । रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसले सूरुवाती अग्रता लिएको छ । यहाँ काँग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन छ ।सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको वडा नं १ को मतगणना अनुसार नेपाली कांग्रेस उम्मेदवार ईस्तीयाक अहमदले ३९१ मत पाएका छन् । उनलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवार सागर प्रताप राणाले १६५ मतका साथ...
महोत्तरी । बर्दिबास नगरपालिकामा ४६७ मतगणना हुँदा स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रल्हाद क्षेत्रीले अग्रता लिएका छन् । ४६७ मतगणना गर्दा क्षेत्रीले १९०, एमालेका टेकबहादुर बलाम्पाकीको १०३, माओवादी केन्द्रका राजु खड्काको ५४, कांग्रेसका चिरञ्जीवी हमालले ५ मत ल्याएको निर्वाचन अधिकृत भुपेन्द्र सापकोटाले जानकारी दिए । उपमेयरमा एमालेकी...
प्रधानमन्त्रीको गृहपालिकामा कांग्रेसलाई कांग्रेस(वीपी)को टक्कर
काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको घर रहेको डडेलधुराको गन्यापधुरा गाउँपालिकामा कांग्रेस र कांग्रेस वीपीबीच कडा टक्कर देखिएको छ । गन्यापधुरा गाउँपालिकामा कांग्रेसका अध्यक्ष उम्मेदवार ईन्द्रबहादुर कार्कीले ५०० मतसहित अग्रता लिएका छन् । उनलाई नेपाली कांग्रेस (वीपी)बाट अध्यक्षका...
केपी ओलीको गृहनगरमा एमालेको अग्रता
काठमाण्डौ । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृहनगरसमेत रहेको झापाको दमक नगरपालिकामा मतगणना सुरु भएको छ । यो नगरपालिकाको सुरुवाती मतपरिणामअनुसार एमालेले अग्रता लिएको छ । दमक–१ को २ सय मत गणना हुँदा मेयरमा एमालेकी गिता अधिकारीले ९६ मतसहित अग्रता लिएकी छिन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी राप्रापका राम थापाले ७९ मत प्राप्त...
जनकपुरमा रोचक भिडन्त, ३ स्वतन्त्र उम्मेद्वारको अग्रता
काठमाण्डौ । देशका ११ उपमहानगरपालिकामध्ये जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका मतगणना सुरु गर्ने पहिलो उपमहानगरपालिका बनेको छ । यो उपमहानगरपालिकाको सुरुवाती मतगणनामा नेपाली कांग्रेसका विद्रोही उम्मेद्वारले अग्रता लिएका छन् । बिहान ५ बजेदेखि सुरु भएको मतगणनाको क्रममा स्वतन्त्र उम्मेद्वार मनोजकुमार साहले ३९ मतसहित अग्रता लिएका हुन्...